यो साता ४७ अर्बले बढ्यो लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य : परिसूचकमा २३.६५ अंकको वृद्धि
असार ५, काठमाडौं । नेपालको शेयर बजारले यो साता ३ हजार विन्दु पार गरेर फर्किएको छ । १ हजार १०० विन्दुदेखि उकालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक यस साता ३ हजार २५ दशमलव ८२ विन्दुसम्म पुगेको हो ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन २ हजार ९४४ दशमलव ७८ विन्दुमा बन्द भएको बजार साताको पहिलो कारोबार दिन ३८ दशमलव ३२ अंक र दोस्रो दिन ४२ दशमलव ७२ अंक बढेर हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्न सफल भएको थियो ।
त्यसपछिको तीन कारोबार दिन भने बजार घटेको छ । तेस्रो कारोबार दिन ३ दशमलव ७२ अंक, चौथो दिन ५२ दशमलव ४१ अंक र पाँचौ दिन १ दशमलव २९ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक २ हजार ९६८ दशमलव ४३ विन्दुमा बन्द भएको हो । तीन ओटा कारोबार दिन बजार घटेपछि गत साताभन्दा यो साता २३ दशमलव ६५ अंक माथि नेप्से परिसूचक पुगेको छ ।
लगानीकर्ताहरुलाई संयम र सजग भई लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो साता पनि जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न जारी गरेको अवधारणापत्रबाट पनि लगानीकर्ताहरु आत्तिएको देखिन्छ । बोर्डले मंगलवार धितोपत्र कारोबारमा निहित जोखिमलाई ध्यानमा राखी कारोबारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै अवधारणापत्र जारी गरेको थियो ।
पछिल्लो समय धितोपत्र दोस्रो बजारमा देखिएको उत्साहकाबिच जोखिम पनि बढ्दै गएको भन्दै विभिन्न ५१ सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था सहितको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै बोर्डले ती कम्पनीहरुको शेयरमा लगानी जोखिमयुक्त भएको बताएको थियो ।
बोर्डले विज्ञप्ती जारी गर्नुभन्दा अघिल्लो कारोबार दिनसम्म उच्च दरमा बढेको नेप्से परिसूचक मंगलवारदेखि भने घटेको हो । बोर्डले ती कम्पनीहरुको वास्तविक वित्तीय अवस्था अनुसार शेयरमूल्यमा अस्वभाविक वृद्धिले बजारमा चलखेल भएको अनुमान गर्दै अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको बताएपछि लगानीकर्ताहरु आत्तिएर शेयर विक्रीमा सक्रिय भएकाले परिसूचकमा असर परेको हो ।
बोर्डले मंगलवार साझ अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको भएपनि भित्रि सूचना भने अगाडीनै चुहाएको अनुमान जानकारहरुले लगाएका छन् । बोर्डले अवधारणापत्र जारी गर्नुअघिनै आफ्ना नजिकका लगानीकर्ताहरुले सम्बन्धित सूचनाको विषयमा जानकारी गराएकाले नै सोमवारसम्म गति लिएको बजार मंगलवारको कारोबार पनि प्रभावित भएको अनुमान जानकारहरुले लगाएका हुन् ।
बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई सजग गराउँने उदेश्य सहित जारी गरेको कम्पनीहरु प्रतिको धारणलाई धेरैले प्रकृया गलत भएको बताएका छन् । शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले बोर्डको उद्देश्य सहि भएपनि तरिका गलत भएको बताए । लगानीकर्ताहरुलाई बजारमा मूल्यमा हुने घटबढलाई पुष्टि गर्ने आधारहरु प्रस्तुत गरी सजग गराउनु पर्नेमा कम्पनीको नामनै सार्वजनिक गर्नु गलत भएको उनको ठहर छ ।
बोर्डको प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक भएपश्चात लगानीकर्ताहरुमा केहि अन्योलता देखिएकोले बजार प्रभावित बनेको हो । पछिल्लो कारोबार दिनको कारोबार रकमलाई हेर्दा सस्तोमा शेयर विक्री गर्न लगानीकर्ताहरुले चाहेका छैनन् यसले पनि आगामी दिनमा बजारले सकारात्मक गति लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् ।
यो साता गत साताको तुलनामा कारोबार रकममा भने कमी आएको छ । यद्यपी यसै साता हालसम्मकै सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको थियो । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेको इतिहासमै सबैभन्दा बढी रू. १९ अर्ब ५५ करोड १ लाख ६६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । त्यस दिन उक्त रकम बराबरको ३ करोड ७० लाख ७६ हजार ४३९ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
यो सता पाँच ओटा कारोबार दिनमा भने रू. ८१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख ८६ हजार बराबरको १५ करोड १७ लाख ७ हजार ४८२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । गत साता रू. ८३ अर्ब १३ करोड ९२ लाख ५० हजार बराबरको १७ करोड ५ लाख ९० हजार ६४३ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
गत साताभन्दा यो साता कारोबार रकम रू. १ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख ६४ हजार र कारोबार कित्ता १ करोड ८८ लाख ८३ हजार १६१ कम भएको हो । साताको पहिलो कारोबार दिन करीब रू. २० अर्ब र दोस्रो दिन करीब रू. १९ अर्बको शेयर कारोबार भएको बजारमा तेस्रो दिन रू. १६ अर्ब ५२ करोड, चौथो दिन रू. १५ अर्ब ४८ करोड र पाँचौ दिन रू. १० अर्ब ९० करोडभन्दा बढीको मात्र कारोबार भएको छ ।
तीन दिन घटेको बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य अर्थात् कुल बजार पूँजीकरण रकम रू. ४७ अर्ब २० करोड ७० लाख ८८ हजारले वृद्धि भएको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. ४० खर्ब ९२ अर्ब ८ करोड ६५ हजार रहेको कुल बजार पूँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. ४१ खर्ब ३९ अर्ब २८ करोड ८० लाख ५३ हजार कायम भएको छ ।
यो साता सबैभन्दा बढी होटल्स तथा पर्यटन समूहले कमाएका छन् भने व्यापारिक समूहले सर्वाधिक गुमाएका छन् । गत साताभन्दा यो साता होटल्स तथा पर्यटन समूहको परिसूचक ६ दशमलव २४ प्रतिशत बढेको हो भने व्यापारिक समूहको ४ दशमलव ८१ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो ।
गत साता र यो साता तुलनात्मक रुपमा बजारका सूचकहरु :
यो साता समूहगत परिसूचकमा भएको थपघटको अवस्था :
सिद्धार्थ क्यापिटल अन्तर्गतका दुवैै योजनाको धितोपत्रमा गरेको लगानीको परल मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी [२०७८ सावन, १३]
अपि पावरको अतिरित हकप्रद शेयर आजदेखि लिलामीमा [२०७८ सावन, १३]
लक्ष्मी उन्नति कोषको इकाई मूल्य समायोजन [२०७८ सावन, १३]
छिटो अवधिभित्र विक्री भएन नबिल बैंकको ऋणपत्र, साउन २४ गतेसम्म विक्रीको मिति तय [२०७८ सावन, १३]
सिद्धार्थ क्यापिटल अन्तर्गतका दुवैै योजनाको धितोपत्रमा गरेको लगानीको परल मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी